Islam Virus: Coexist with Islam ? Accept Coexistence ?
Co-Exist with Islam?
အစ္စလမ်ဘာသာကို ဘာသာခြားနိုင်ငံမှာ အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းစွာသာသနာပြုခွင့်ပေးသင့်တယ်။
မေးခွန်းက အစ္စလမ်နိုင်ငံတွေမှာ ( အဓိက ဌာနချုပ် ဆော်ဒီမှာ) ဘာသာခြားတွေကို အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းစွာသာသနာပြုခွင့်ပေးနေသလား။ ဘာသာခြား သာသနိက အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်ခွင့် ၊လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ် သာသနာပြုခွင့်ပေးနေသလား။
ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်..ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် ၊ လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့်..
ဘာသာခြားနိုင်ငံတွေမှာ ရောက်နေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ လက်သုံးစကား ဒါက မွတ်ဆလင်တွေ ၅၀% မကျော်ခင်၊ မွတ်ဆလင်လူနည်းစုဖြစ်နေချိန်လက်သုံးစကား ။
ဒီမွတ်ဆလင်တွေပဲ မွတ်ဆလင် ၅၀% ကျော်သွားချိန်ကျတော့ ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်အကြောင်းလေသံတောင် မဟတော့ဘူး။
ဒါ့အပြင် မွတ်ဆလင် ၅၀%ကျော်သွားတဲ့ မြို့ ရွာဒေသ၊ နိုင်ငံတွေမှာ ဘာသာခြားတွေကို Genocide လုပ်တာတွေ ကတော့ လက်တွေ့ မြင်နိုင်ပါတယ်။
မွတ်ဆလင်လူနည်းစုဖြစ်နေချိန်၊ ငါတို့ ကို လုပ်နေပါတယ် ( စပီကာနဲ့ အော်)။
မွတ်ဆလင်လူများစု ဖြစ်သွားချိန်၊ လူနည်းစုဘာသာခြားတွေကို သတ်ရင်တော့ သိတောင်မသိလိုက်ရဘူး။
မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာရော ဘာသာခြားတွေ လွတ်လပ်စွာသာသနာပြုခွင့်၊ ဘာသာခြား သာသနိက အဆောက်အအုံတွေ ဆောက်ခွင့်ပေးနေသလား။
မက်ကာမြို့ နဲ့ မက်ဒီနာ မြို့ တွေကို ဘာသာခြားတွေ လုံး၀၀င်ခွင့် ခြေချခွင့်မရှိပါဘူး။
ဘာသာခြားတွေ ၀င်ရင်သေဒဏ်ပါ။ လည်လှီးသတ်ပါတယ်။
ဆော်ဒီတစ်နိုင်ငံလုံး မည်သည့်ဒေသ၊ မည်သည့်မြို့ မှာ မဆို ဘာသာခြား သာသနိက အဆောက်အအုံ လုံးဝ ( လုံးဝ) ဆောက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဆော်ဒီမွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်မြေမှာ ဘာသာခြားအဆောက်အအုံ 0% ပါ။
ရှင်းတယ်နော်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူဘယ်နှစ်မျိုးရှိရှိ...အစ္စလမ်ကုရ်အာန်ကျမ်းက ခွဲထားတာကမ္ဘာပေါ် မှာ လူနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ House of Islam VS House of War ။
အစ္စလမ်ကုရ်အာန်ကျမ်းက ခွဲထားတာကမ္ဘာပေါ် မှာ လူနှစ်မျိုးပဲရှိတယ် ..မွတ်ဆလင်နဲ့ မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့လူတွေ။
မွတ်ဆလင်မဟုတ်တဲ့ လူမှန်သမျှ ဟိန္ဒူ ၊ခရစ်ယာန် ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဆစ်၊ ဂျူး၊ ဘာသာမဲ့၊ ကွန်မြူနစ်၊ အားလုံးက Non-Muslim ပဲ နှစ်မျိုးပဲရှိ်တယ်နော်။ တွေ့ တယ်ဟုတ်။
ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ အားလုံးဟာ Non-Muslim တွေပဲ ။ ညီညွတ်ကြမှဖြစ်မယ်။
မွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီတစ်နိုင်ငံလုံး မည်သည့်ဒေသ၊ မည်သည့်မြို့ မှာ မဆို ဘာသာခြား သာသနိက အဆောက်အအုံ လုံးဝ ( လုံးဝ) ဆောက်ခွင့်မရှိပါဘူး။ ဆော်ဒီမွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်မြေမှာ ဘာသာခြားအဆောက်အအုံ 0% ပါ။
ဘာသာအားလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရအောင်။ သိပ်ကောင်းတာပေါ့။ သိပ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေး အဓိပ္ပါယ်ကို ဖေါ်ဆောင်တာပဲ။
မေးခွန်းက ဘယ်မှာလဲ ...?
ဆော်ဒီမှာလား။ အီရန်မှာလား။ အာဖဂ္ဂန်နစ္စတန်လား။ ဘာရိန်းမှာလား။ ကူဝိတ်မှာလား။ ကာတာမှာလား။
အင်္ဂလန်မှာ ဗလီအလုံး ၁၅၀၀ ကျော်ဆောက်ပြီး ဆော်ဒီမှာ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းတစ်ခု မှ ပေးမဆောက်ပဲနဲ့ဘာသာအားလုံး ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရအောင်တဲ့ ။
မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ deceit က တော့ ...
အင်္ဂလန်မှာ ဗလီအလုံး ၁၅၀၀ ကျော်ဆောက်ခဲ့သလို ဆော်ဒီ မှာ လည်း ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း ၁၀၀၀ ကျော်၊ ဗုဒ္ဓဘာ သာသနာပြုဘုန်းကြီးကျောင်း ၁၀၀၀ကျော် ဟိန္ဒူ ဘုရားကျောင်း ၁၀၀၀ ကျော်
ဥရောပက ခရစ်ယာန်တွေကို အစ္စလမ်သာသနာ့ အလင်းရောင်ကို ပြဖို့ အတွက် Islamic Centre ကြီးတွေ ၊ Mega Mosque ကြီးတွေပြီး ဘာသာခြားတွေကို အစ္စလမ်သာသနာ ပြုကြသလို..
ဆော်ဒီက မွတ်ဆလင်တွေကို လည်း မွတ်ဆလင်ဘ၀ က ကျွတ်လွတ်အောင် ငြိမ်းချမ်းစွာ ဗုဒ္ဓသာသနာ ပြုကြမယ်လေ။ ဘာသာအားလုံးငြိမ်းချမ်းစွာ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ သာသနာပြုကြမယ်လေ။
ဆော်ဒီက မွတ်ဆလင်တွေကို လည်း မွတ်ဆလင်ဘ၀ က ကျွတ်လွတ်အောင် ငြိမ်းချမ်းစွာခရစ်ယာန်သာသနာ ပြုကြမယ်လေ။ ဘာသာအားလုံးငြိမ်းချမ်းစွာ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ သာသနာပြုကြမယ်လေ။
သူ့ သာသနာ၊ သူ့ ဘာသာ၊
သူပြု ကိုယ်ပြု ခွင့်ပေးလေ။
Fair play သာဆိုရင် မွတ်ဆလင်တွေက လူသတ်ခိုင်းတဲ့ အစ္စလမ်အယူဝါဒကို စွန့် ခွာမှာပေါ့။
ဘောလုံးပွဲလို သူဂိုးသွင်း၊ ကိုယ်ဂိုးသွင်းပေါ့။
50..50 ပေါ့။ ပိုကောင်းတဲ့ အသင်း က အနိုင်ရမှာပေါ့။
ဘယ့်နှယ်လဲ.. မွတ်ဆလင်တွေကတော့ သူများ ဘာသာ၊ သာသနာကို ဖျက်ဆီးမယ်။
သူများ ဘာသာခြားနိုင်ငံမှာ ကြိုက်သလို ဗလီဆောက်ခွင့်ပေးရမယ်။ မပေးရင် Racist တဲ့။
ဆော်ဒီ၊ အီရန်၊ ဘာရိန်း၊ ကာတာ၊ ကူဝိတ်တို့ မှာကျတော့ မွတ်ဆလင် အများစုနိုင်ငံတွေကျတော့ သူများဘာသာခြားတွေကို လုံးဝ သာသနာပြုခွင့်မပေးဘူး။ ( ၁%တောင် ရှိပါ့မလား )
ဆော်ဒီ ၁၀၀% မွတ်ဆလင်၊ တူရကီ ၉၉% မွတ်ဆလင် (မူလခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မှာ ၁%သာကျန်)
အီရန်တွင် Zoroastrian ဘာသာဝင်မှာ ၁% ပင်မရှိတော့ပါ။
မူလ ဘာသာဝင်လူဦးရေတောင် ၁% ပဲကျန်အောင်မွတ်ဆလင်တွေ ရက်ရက်စက်စက် ဗျင်းထားပါတယ်ဆိုမှတော့ မူလဘာသာရေး အဆောက်အအုံတွေ ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားသာကြည့်ကျပါတော့
မူလအင်ဒိုနီးရှားမှာ ရှိခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီ၊ပုထိုးတွေ ဟာ ပုဂံမြောက်ဦးထက် မများရင်သာရှိမယ်။ နည်းတော့နည်းခဲ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ထောင်နဲ့ ချီပြီးဗုဒ္ဓဘာသာစေတီ၊ပုထိုးတွေ ရှိခဲ့မှာပဲ။
အခု မွတ်ဆလင်အင်ဒိုနီးရှားမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီ၊ပုထိုးတွေ ဘယ်နှစ်ဆူပဲကျန်တော့လဲ။
အားလုံးကို မွတ်ဆလင်တွေရက်ရက်စက်စက် ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးပါပြီ။
ဒီတော့ သူများဂိုးကျတော့ အားရပါးရ၊ သွင်းချင်တယ်။
ကိုယ့် ဂိုးကျတော့ သူများသွင်းသွားမှာ သိပ်ကြောက်တယ်။ မွတ်ဆလင်တွေက ဘာကောင်တွေလဲ။
သူများဘာသာခြား ( လူမျိုးပွားစက်) မိန်းမတွေ၊ မြန်မာမိန်းကလေး၊ ပြင်သစ်မိန်းကလေး၊ အင်္ဂလိပ်မိန်းကလေး တွေကို ကျတော့ ရအောင်ယူ၊ အစ္စလမ်ဘာသာ မျိုးပွားချင်တယ်။
ဘာသာခြား ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ မျိုးဆက် တုံးသွားစေတဲ့ အပြင် ကိုယ့်ရဲ့ မွတ်ဆလင်မျိုးဆက် ဆတိုး တိုးလာမယ်။ တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်။
ကိုယ့်မွတ်ဆလင် မျိုးပွားစက် ( မိန်းကလေး) တွေကို ကျတော့ ဘာသာခြားတွေ နဲ့ လုံးဝမယူခိုင်ဘူး။
ယူပြီး ဘာသာခြားမျိုးဆက်ပြောင်းမွေးမှာ ထက်စာရင် အသေသတ်ပစ်တယ်။
ဒီမွတ်ဆလင်မိန်းကလေးရဲ့ မွတ်ဆလင်မျိုးဆက် တုံးသွားစေကာမူ ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ မျိုးဆက် အဖြစ်ထပ်မံ မတိုးပွားစေဖို့့။ ပေါက်တယ် ဟုတ်။
ကိုယ့်မွတ်ဆလင်မ်ိန်းကလေး က သစ္စာဖေါက်ပြီး ရန်သူဘာသာခြား ဘက်ကို ပါသွားပြီး ဘာသာခြားမျိုးဆက် ကလေးမွေးပေးနေမှာထက်စာရင် လက်စတုံးသတ်လိုက်တော့ ၊ ရန်သူ ခရစ်ယာန်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘာသာခြား မျိုးဆက် အဖြစ်ထပ်မံ မတိုးပွားစေတော့ဘူး။
လွတ်လပ်စွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခွင့်ကို ဆော်ဒီမှာ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း ၁၀၀၀၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီး သာသနာပြုကျောင်း ၁၀၀၀၊ ဟိန္ဒူ သာသနာပြုကျောင်း ၁၀၀၀ ကျော် ဆောက်ပြီး စတင်လိုက်ရအောင်။
မွတ်ဆလင်တို့ ရဲ့ ဌာနချုပ် ဆော်ဒီမှာ ဘာသာအားလုံး လွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူတကွ ယဉ်တွဲနေထိုင် ခွင့် ရတဲ့ အချိန်ကျမှ နိုင်ငံအသီးသီး က မွတ်ဆလင်တွေရဲ့ ဗလီဆောက်ခွင့်ကို ပေးပါ။
ဆူးလေဘုရား ပရ၀ဏ်က မြေကို ယူပြီး ဗလီကြီး ဟီးနေအောင် ဆောက်လို့ ရရင်၊ မက်ကာမြို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတာ ရှိရမယ်။
ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ မက်ကာမြို့ ဗလီကြီးနားမှာ လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာစေတီတော်မြတ်ကြီး တည်ချင်ပါတယ် ။
မြန်မာပြည်ပေါက် မွတ်ဆလင် ( ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မွတ်ဆလင် က တစ်သွေးတည်းဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာပြည်မှာ ပေါက်ဖွားကြီးပြင်းပေမယ့် မွတ်ဆလင်တိုင်း အစ္စလမ်ဘာသာ Islamization အပေါ် အဆုံးစွန် သစ္စာစောင့်သိရိုသေမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာပြည်ပေါက် မွတ်ဆလင်လို့ သုံးပေးထားပါတယ် ။
မဟုတ်ဘူး.. မြန်မာနိုင်ငံ အပေါ် သစ္စာစောင့်သိရိုသေတာပါ ဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ ဘင်္ဂါလီဖြစ်ပါတယ်လို့ မြန်မာပြည်ပေါက် မွတ်ဆလင်များ အဖွဲ့ချုပ် အနေ
နဲ့ Statement ထုတ်ပေးပါ။ မြန်မာပြည်ပေါက်မွတ်ဆလင်များ ဘင်္ဂလီတွေကို တိုင်းသိပြည်သိ ကန့် ကွက်ပါ။ ဘယ့်နှယ်လဲ.. လဲရဲသလား။ အစ္စလမ်ဘာသာ ၊ Islamization မွတ်ဆလင်သွေးသားအချင်းချင်းအပေါ် အဆုံးစွန် သစ္စာစောင့်သိရိုသေ ခြင်းနဲ့ မြန်မာလူမျိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်တဲ့ စိတ်။ )
ဒါကဆော်ဒီ မွတ်ဆလင်နိုင်ငံပဲ။ ငါတို့ ကမြန်မာပြည်ပေါက် မွတ်ဆလင် ပဲ။ ဘာဆိုင်လို့ လဲ။ ..ဆိုရင်
မြန်မာပြည်ပေါက် မွတ်ဆလင်တွေ ဗလီတက်ရင် ဆော်ဒီ မက်ကာ ကျောက်တုံးနက်လေး ကို ဦးမတိုက်နဲ့ လေ။
ဆော်ဒီနိုင်ငံကို မြန်မာပြည်ပေါက် မွတ်ဆလင်တွေ Hajj မသွားနဲ့ ပေါ့။
ပြင်သစ်ဗလီကြီးဆိုတာ ရှိရင် မက်ကာမြို့ ကက်သလစ် ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းဆိုတာရှိရမှာပေါ့။
အိန္ဒိယမှာ ဗလီတွေ ထောင်နဲ့ ချီဆောက်ရင် မက်ကာမြို့ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းဆိုတာလဲ ရှိရမှာပေါ့။
ဘာသာပေါင်းစုံ အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းကို စံပြနိုင်ငံအနေနဲ့ 
မွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီ နိုင်ငံမှာ ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း ၁၀၀၀၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီး သာသနာပြုကျောင်း ၁၀၀၀၊ ဟိန္ဒူ သာသနာပြုကျောင်း ၁၀၀၀ ကျော် ဆောက်ခြင်းဖြင့် စလိုက်ကြရအောင်။
Yes, Coexist with Islam. We have to accept Coexistence. Let's start with Saudi Arabia.
ဘာသာပေါင်းစုံ အတူတကွ ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြမယ်။ မွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီ နဲ့ ရှရီးယားမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ အရင်ဆုံး ။
ဘာသာပေါင်းစုံ လွတ်လပ်စွာသာသနာပြု ကြမယ်။ မွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီ နဲ့ ရှရီးယားမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ အရင်ဆုံး ။
ဘာသာပေါင်းစုံ က သာသနာပြုအဆောက်အအုံထောင်နဲ့ ချီပြီး လွတ်လပ်စွာ သာသနာပြုကြမယ်။မွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီ နဲ့ ရှရီးယားမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ အရင်ဆုံး။
ဘာသာပေါင်းစုံ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်ပေးရမယ်။ မွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီ နဲ့ ရှရီးယားမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ အရင်ဆုံး။
ဘာသာအားလုံးကို တန်းတူရည်တူ သာသနာပြုခွင့်အရေးပေးရမယ်။ မွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီ နဲ့ရှရီးယားမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ အရင်ဆုံး။
ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့် အတွက် အဆုံးစွန်တိုက် ပွဲဝင်ကြမယ်။ မွတ်ဆလင်ဌာနချုပ်ဆော်ဒီ နဲ့ ရှရီးယားမွတ်ဆလင်နိုင်ငံတွေမှာ အရင်ဆုံး။